Ipokotho: Ukunyusa uthungelwano kwiMicimbi yezeManyano | Martech Zone
Umqondiso ibonelela ngezixhobo kunye netekhnoloji kubaphathi beeshishini, ababonisi kunye nabaququzeleli bemisitho ukwenza iminyhadala yokuhlangana kunye nenomdla. Ukuxhotyiswa nge Inkqubo yeselfowuni yePoken kunye neemveliso ze-NFC, abantu banokuqokelela umxholo wedijithali kwilizwe lokwenyani ukusuka kwiithegi ezikrelekrele, kwaye ngokwedijithali batshintshise zonke iinkcukacha zabo zonxibelelwano ngomnwe.
The Isixhobo sophawu sisixhobo esinelungelo elilodwa lomenzi esenza ukuba ubenakho ukudlulisa ngokwamanani iinkcukacha zakho zonxibelelwano ngokuchukumisa, okanye uqokelele umxholo wedijithali ogcinwe kwizitikha ezizodwa abazibiza ngokuba zii "tag", ngokubachukumisa. Iphawu likuvumela ukuba wenze ikhadi leshishini ledijithali nazo zonke iiprofayili zakho zenethiwekhi yoluntu, kwaye uyitshintshe nabanye abantu ngokuthinta nje iipoken. Qokelela umxholo wedijithali ngaphandle kweintanethi (ezinjengeevidiyo, amakhuphoni, iincwadana ezinemifanekiso, iifoto), kwaye uzilungiselele zonke kwaye ziyafumaneka kwi-intanethi.
Isicelo sePoken esiphathwayo sikuvumela ukuba uchukumise kwaye uqokelele ulwazi lweshishini lwabanye kumnyhadala okanye ubambe amaxwebhu ngeekhowudi zeQR ekwabelwana ngazo kumsitho.
tags: UkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethikufutshane nonxibelelwano lwentsimiNFCuphawu